China Batch Uhlobo Waste Tire Pyrolysis Plant ifektri abakhiqizi | LYBH
Indlela ye-pyrolysis ingenye yezindlela eziphelele futhi eziphakeme zenani lokwelashwa kwamathayi emfucuza. Ngobuchwepheshe be-pyrolysis bemishini yokwelashwa kwamathayi emfucumfucu, kungasetshenzwa izinto zokusetshenziswa ezinjengamathayi emfucumfucu kanye nama-plastiki odoti ukuze kutholakale uphethiloli, i-carbon black nensimbi yensimbi. Inqubo inezici zokungcoliswa okungu-zero kanye nomkhiqizo ophakeme kawoyela.
1. Vula umnyango ngokugcwele: ukulayisha okulula nokusheshayo, ukupholisa okusheshayo, intambo elula futhi esheshayo ngaphandle.
2. Ukupholisa ngokuphelele kwe-condenser, izinga eliphezulu lokukhishwa kukawoyela, ikhwalithi kawoyela omuhle, impilo ende yokusebenza nokuhlanzwa kalula.
3. Ukususwa kwemodi yamanzi kwasekuqaleni nokususwa kothuli: Ingasusa ngempumelelo igesi le-asidi nothuli, futhi ihlangabezane namazinga afanele kazwelonke.
4. Ilahla ukususwa maphakathi nomnyango wesithando somlilo: komoya, deslgging okuzenzakalelayo, ehlanzekile futhi engenalo uthuli, ukonga isikhathi.
5. Ukuphepha: ubuchwepheshe bokuwelda obucwilisiwe be-arc othomathikhi, ukuhlolwa okungonakalisi kwe-ultrasonic, amadivayisi wezokuphepha azenzekelayo kanye nokuzenzakalelayo.
6. Exhaust igesi alulame uhlelo: kushe ngokuphelele ngemuva kokululama, konga uphethiloli nokuvikela ukungcola.
7. Ukushisa okuqondile: Inqubo ekhethekile inyusa indawo yokushisa ye-reactor, izinga lokushisa likhuphuka ngokushesha, futhi izinga lokushisa kulula ukulilawula, landise ngempumelelo impilo yesevisi yemishini.
8. Idizayini ehlukile yokushiswa kwegobolondo yokushisa: Umphumela omuhle kakhulu wokufaka amandla wokushisa, umphumela omuhle wokonga amandla.
I- isondo lonkeithuthelwa esikhungweni se-pyrolysis ngokusebenzisa imodyuli yokulayisha, isivalo sivele sikhiywe futhi sivalwe, bese kuthi lonke isondo libe ne-pyrolyzed; ngemuva kokwelashwa kwe-pyrolysis, umusi kawoyela ukhishwe, futhi uwoyela negesi kudlula kudivayisi ekhanyayo nesindayo kawoyela negesi. Uwoyela negesi kungena ohlelweni lokuncibilika, ingxenye engakwazi ukucibilika ifingqiwe kuwoyela wesondo, kanti ingxenye engeyona into engaphefumulelwa ukufaka okokushisa uhlelo lokushisa ngomshini ngohlelo lokuhlanzwa kwegesi. Ngemuva kokuphothulwa kwenqubo kawoyela negesi, intambo esele yekhabhoni emnyama nensimbi ikhishwa ngokuzenzakalela ngohlelo oluvaleke ngokuphelele lokukhipha i-slag.
1. Isiphenduli se-pyrolysis sisebenzisa isakhiwo somzimba wokugcina ukushisa ukuze sisebenzise kabusha ngokuphelele imfucuza, engakwazi ukwelula kuphela impilo yenkonzo yesithando somlilo esikhulu, kepha futhi yonge nophethiloli.
2. Kusetshenziswa imbiza ekhethekile yokushisa okuphezulu.
3. Le mishini ifakwe insimbi yokuvimba ngeso lefoni nedivayisi yokwemba, engathola isimo sokuvinjelwa kwamapayipi enqubweni yokukhiqiza futhi ixazulule ngokuzenzakalela inkinga yokuvinjelwa, ukuze kuqinisekiswe ukuthi ngeke kube khona inkinga yokuphepha ngenxa yokuvinjelwa kwepayipi inqubo yokukhiqiza.
4. Isakhiwo somjikelezo ophindwe kabili samukelwa ohlelweni lwe-deslagging, olulawula isikhathi se-deslagging cishe emahoreni ama-2. I-slag iyahlanzwa ngokushesha.
5.Yamukela uhlelo olusha lokuhlanza igesi ukuze wenze igesi ikhishwe ngemuva kokuhlanzwa ihlangabezane namazinga afanele kazwelonke okuphuma
6. Ngemuva kokuphelelwa ngamanzi emzimbeni, ukukhishwa kwesibabule nokususwa kokungcola ohlelweni lokuhlanzwa, igesi evuthayo ngokweqile icindezelwa yi-compressor ekhethekile yegesi futhi igcinwe ethangini lokugcina igesi. Ingasetshenziselwa ukufudumeza ngokuhamba kwesikhathi, noma inikezwe ogesi abaphehla ugesi ukuthi basebenzise noma bathengise.
7. Faka ama-convection vents namadivayisi okupholisa ngokushesha esithandweni esikhulu, ukuze izinga lokushisa kwesithando esikhulu lehliswe lize libe ngaphansi kwezinga-100 degrees emahoreni ama-2.
Iqoqwana Uhlobo isitshalo se-pyrolysis
Isikhala saphansi (ithangi)
* Ingathengiswa ngqo.
* Angasebenzisa imishini yokuphuzisa iziphuzo zazihluzwa ukuthola uphethiloli nodizili.
* Ingasetshenziswa njengophethiloli.
* Imishini yokuhluza i-Carbon emnyama ingasetshenziselwa ukwenza i-carbon black emnyama.
* Imishini ye-Carbon black granulation ingasetshenziselwa ukwenza izinhlayiya.
* Umshini we-Hydraulic baling ungasetshenziselwa ukwenza amabhulokhi ensimbi ezokuthutha nokugcinwa
* Ingasetshenziswa njengophethiloli nge-burner.
* Uphethiloli oweqile ungagcinwa ngohlelo lokugcina.
3. Amafutha atholakalayo wokucubungula i-pyrolysis
Amafutha (amafutha kawoyela, uwoyela wesondo, uwoyela osindayo njll.)
Isikhumba esimnyama seCarbon
Langaphambilini Isitshalo Esiqhubekayo Sokudonswa KweTire Weld Tire
Olandelayo: Intengo Yefektri China Isilahli Serabha Yenkunkuma Yemfucumfucu Yokusebenzisa Kabusha Okuqhubekayo Isitshalo sePyrolysis 50tpd
Iqoqo Le-Pyrolysis Plant
Isitshalo Esiqhubekayo sePyrolysis
Izisetshenziswa Zokuchoboza Imvuthuluka Yemvuthuluka
Isitshalo sePyrolysis Esinobungani Bemvelo
Isitshalo seRubber se-Environmental Friendly Pyrolysis
Isitshalo sePyrolysis Esiqhubeka Ngokugcwele
Nokusebenzisa kabusho imikhiqizo esisebenzile Plastic
Irabha Powder Production Line
Umshini Wokusebenzisa Kabusha iTire
ITire Recycling Pyrolysis
ITire Shredding Palnt
Umshini Wokusika iTire
ITire Mulch Isetshenziswa Kabusha Palnt
ITire Recycling Palnt
Umshini Osebenzisa Kabusha iTire
Ukusingathwa KweTire Ukusingathwa kabusha kwePyrolysis
Imininingwane Yomkhiqizo: Isithando somlilo sokuqhekeka esiqhubekayo, esaziwa nangokuthi i-U-type cracking furnace, senzelwe isanti kawoyela sludge kanye nesitshalo sokwelashwa kwendle, isithando somlilo esikhulu sehlukaniswe izingxenye ezimbili: isithando somlilo esomile, isithando somlilo se-carbonization. Okokusebenza kuqala kungena esithandweni sokomisa, ukomisa kokuqala, ukuhwamuka kokuqukethwe kwamanzi, bese kungena ekuqhekekeni kwesithando se-carbonization, imvula yokuqukethwe kukawoyela, bese kukhishwa insali ejwayelekile, ukufeza okuqhubekayo ...
Iqoqo Le-Pyrolysis Plant, Indawo Yokuhlanza Iplastiki, Umshini We-Plastic Recycling, Isitshalo Esiqhubekayo sePyrolysis, ITire Pyrolysis, Umshini Wokusebenzisa Kabusha iTire,